Secrets of Christmas, iyinhlangano brand new slot game ukuthi lwakhiwe izici eyokwenza kweso setha isimo kaKhisimusi. With izinga ihluzo obala, lo slot game iye izakhi Gameplay emangalisayo futhi high izici win. I slot egcwele osebenzisa free isici abadlali ukujabulela futhi ayinqobe kakhulu kuwo. Ukuqhubeka ukugubha isikhathi ozithandayo of the year nale slot game enhle.
With a okuvuzayo kakhulu ibhonasi sici, kukhona inala onqobayo uma spin reels ilungelo kulesi Christmas-themed Slots game. Okudlalekayo kuwo wonke amadivayisi ezahlukene, lokhu kuyinto ezithakazelisayo slot game izithombe elihle reels we slot; le game has Christmas lezimanga abadlali ukunqoba. Zibukeke futhi obonisa Gameplay kumnandi, kukhona sici obuningi elenza lokhu eyodwa uyisidingo play.
Mayelana nonjiniyela Wezimfihlo Christmas
Secrets of Christmas lakhiwa NetEnt okuyinto imidlalo izinga lokuthi bazothanda ezaziwa. Baye wadala inala sonke semidlalo yasekhasino futhi ngalinye linomsebenzi izinga ihluzo futhi iye yaziswa kakhulu ngenxa yokuthi Gameplay zibonisa. Ziyakwazi omunye amagama odumile kakhulu embonini iGaming ukuthi balwela ukunikeza abadlali isipiliyoni best.
Okuningi on the Gameplay
Bangu 5 itolitji futhi 25 paylines ngoba abadlali kanye nobukhulu uhlamvu lwemali zokhahlamba kusuka 0.25 ukuze 125.00. Beka ukubheja wakho bese uchofoza inkinobho isiqalo spin reels, Isikhathi ngasinye emazweni umdlali ukumadanisa amatshwayo, kuyoba onqobayo ozayo indlela yakho. Umdlalo libuye izici osebenzisa khulula, bonus emahlandla nokuningi abadlali ukunqoba kunazo.
The Christmas bell liwuphawu aphakeme kakhulu futhi okhokhela ngokwanele futhi angakwazi ukukhokhela wena kuze 1250 Izikhathi usayizi ukubheja. I Santa yiyona sasendle shintsha nye izimpawu ukuqedela inhlanganisela lokuwina kanye onqobayo ukuthi nomhlaba zasendle ziyoba ngaphezulu. I chitha ngakolunye uhlangothi emelelwa isaka amathoyizi okuzobe kusebenze osebenzisa free kanye bonus emahlandla. Yenza iningi izimpawu okusezingeni okhokhela izici ukunqoba kunazo.
Beka ukubheja wakho, spin reels bese ukudlala Secrets of Christmas at Top Slot Site Casino. Watch out for the chitha, izimpawu zasendle, kanye nezinye izimpawu ezikhethekile ukuba ukunqoba more nge zonke spin.